Izicwangciso zokuphumelela ngokuphumelela iBond School
Ootitshala Ukubandakanya uluntu
Iingcebiso Zokuphumelela Ngempumelelo I-Bond Issue
Ibhondi yesikolo inikeza indawo yezemali kwizithili zesikolo ukuhlangabezana neemfuno ezikhankanywe ngokukhawuleza. Ezi zidingo zichongiwe zivela kwisikolo esitsha, isakhiwo samagumbi okufundela, i-gymnasium, okanye indawo yokutya ukuze kulungiswe isakhiwo esele sikhona, iibhasi ezintsha, ukuphuculwa kwitheknoloji yamagumbi okufundela okanye ukhuseleko, njl. Umba wokubambisa isikolo kufuneka uvotelwe ngamalungu oluntu esikolweni. Uninzi lwamazwe ludinga i-voti yesithathu (60%
Ukuba ibhondi yesikolo idlulayo, abanini bepropati kuluntu baya kunyalela ibhili-mali yokugqithiswa kwebhondi ngokunyusa irhafu yerhafu. Oku kungabangela ingxaki kubavoti kuluntu kwaye kutheni uninzi lwezinto ezinxulumene nezibambiso ezingafumani iivoti ezaneleyo "yee". Kuthatha ukuzinikezela, ixesha, nokusebenza kanzima ukugqithisa umtshato. Xa kudlula kwakukufanelekile, kodwa xa ihlulekayo ingadakalisa kakhulu. Ayikho inzululwazi echanekileyo yokudlulela umba. Nangona kunjalo, kukho izicwangciso eziza kwenziwa xa ziphunyeziweyo zinganceda ukuphucula amathuba okugqithiswa kwebhondi.
I- superintendent yesithili kunye nebhodi yesikolo zidla ngokubangela ukuqhutyelwa kwebhondi. Banoxanduva lokungena emphakathini, ubudlelwane bokwakha, nokugcina abantu besazi malunga noko kwenzeka ntoni kwisithili. Kubalulekile ukuba nobudlelwane obuhle kunye namaqela anamandla asekuhlaleni nabanikazi bamashishini abalulekileyo phakathi koluntu ukuba ufuna ukuba udityaniswe.
Le nkqubo kufuneka iqhubeke kwaye iqhubekeke ngexesha elide. Akufanele kwenzeke nje ngokuba uzama ukudlula isibophelelo.
I-superintendent eqinileyo iya kwenza isikolo sabo sibe ngundoqo kwindawo yoluntu. Baya kusebenza kanzima ukuhlawulela ezo nxulumano eziya kuhlawula ngexesha leemfuno. Baya kwenza ukubandakanyeka komphakathi ibe yimpumelelo yokumema amalungu esikolweni kungekuphela nje ukubona oko kwenzeka kodwa ukuba abe yinxalenye yenkqubo ngokwayo.
Ukugqithisa ukugqithiswa kwengxowa-mboleko yinto eminye yemivuzo eninzi ehamba nale ndlela epheleleyo yokubandakanyeka koluntu .
Hlela kunye noCwangciso
Mhlawumbi inxalenye ebaluleke kakhulu yokudlulisa isibophelelo esikolweni kukucwangciswa kakuhle kwaye ibe nesicwangciso esiqinileyo. Oku kuqala ngokumisela ikomiti ezinikezele ekuboneni utywala olugqityiweyo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba amaninzi amazwe avimbela izikolo ukuba zisebenzise izibonelelo zabo okanye ixesha lokubamba egameni lomtshato. Ukuba ngaba ootitshala okanye abalawuli kufuneka bathathe inxaxheba kwikomiti, kufuneka kube ngexesha labo.
Ikomidi elomeleleyo liya kuba namalungu ebhodi yezikole, abalawuli, ootitshala, amabhunga eengcebiso, iinkokheli zoshishino, abazali kunye nabafundi. Ikomiti kufuneka igcinwe encinci kangangoko ukwenzela ukuba isivumelwano sifumaneke lula. Ikomiti kufuneka ixoxe kwaye idale isicwangciso esicacisiweyo kuzo zonke iinkalo zobhondi kuquka ixesha, iimali kunye nokukhankanywa. Umsebenzi othile kufuneka unikezwe ngalinye ilungu lekomiti ukuba liphunyezwe ngokwamandla abo.
Iphulo lokubambisa isikolo kufuneka liqale malunga neenyanga ezimbini ngaphambi kokuvota ukuba kwenziwe. Yonke into eyenzeka kulezo zimbini iinyanga kufuneka icetywe kakuhle kwaye ilungiselelwe kwangaphambili.
Akukho maphulo amabini edibeneyo afanayo. Kungenzeka ukuba iinqununu zesicwangciso kuya kufuneka zishiywe okanye zitshintshwe emva kokuqaphela ukuba indlela ayisebenzi.
Kubalulekile ukuseka imfuno yangempela kwiphulo lakho lesibhondi. Uninzi lwezithili luluhlu lweeprojekthi ezikholelwa ukuba kufuneka zizaliswe. Xa ukhetha isigqibo sokuba uza kubeka ubhondi kubalulekile ukujonga izinto ezimbini: iimfuno ezikhawulezileyo kunye notyalo-mali kumzi womfundi wakho. Ngamanye amazwi, faka iiprojekthi kwi-voti eya kubakho abavoti abaqonda ixabiso lemfundo baze babonise ukuba kukho imfuno.
Yenza ezo zixhumo ngaphandle kwephulo lakho kwaye zenze izinto xa zifanelekileyo. Ukuba uzama ukwakha i-gymnasium entsha, uyiphakamise njengesibonelelo esininzi esingasisebenzisi nje njengendawo yokuzivocavoca kodwa njengengingqi yoluntu kunye nendawo yokuhlola ukuze isetyenziswe ngabo bonke abafundi kwaye kungekhona nje kuphela abakhethiweyo abambalwa.
Ukuba uzama ukugqithisa ibhondi yeebhasi ezintsha, lungele ukucacisa ukuba ungakanani imali ochithayo ngoku ukugcina ibhasi yakho yebhasi ephelelwe yisikhathi kwaye ihlasele. Unokusebenzisa ibhasi elonakalisiweyo kwiphankaso yakho ngokupaka phambi kwesikolo ngolwazi malunga nokubopha.
Kubalulekile ukuba uthembeke kunye nabamalungu kwisithili sakho. Abanikazi bepropati bafuna ukwazi ukuba iirhafu zabo ziya kukwenyuka ukuba umcimbi ogqithisiweyo uyadluliselwa. Akufanele ukhange i-skirt kulo mbandela. Yiba ngqo kwaye uthembeke nabo kwaye usoloko usebenzisa ithuba ukuchazela oko utyalo-mali lwabo oya kwenza kubafundi kwisithili. Ukuba awunyanisekanga nabo, unokugqithisa umbandela wokuqala, kodwa kuya kuba nzima xa uzama ukudlula olandelayo.
Phulo! Phulo! Phulo!
Xa umkhankaso uqala ukuba luncedo ukugcina umyalezo ulula. Yiba nomxholo wakho ngomyalezo wakho kubandakanya umhla wokuvota, ubuninzi bebhondi, kunye nezinye izinto ezilula eziza kusetyenziswa. Ukuba umvoti ucela ulwazi oluthe vetshe, yilungiselele ngeenkcukacha ezininzi.
Imizamo yokukhankanya kufuneka ibe yinto epheleleyo kunye nenjongo yokufumana igama kubo bonke abavoti ababhalisiwe kwisithili. Ukukhankanywa kwenzeka kwiindlela ezahlukeneyo, kwaye ifom nganye iya kufumana i-subset ehlukeneyo yabameli. Ezinye zeendlela ezithandwa kakhulu zibandakanya:
Yakha iWebhsayithi - Yenza iwebhusayithi eyenza abavoti ngolwazi oluchanekileyo malunga nombambiswano.
Iimpawu zoPhulo / iiPosters - Beka iimpawu zephankaso kwididi zabasekeli kunye neefowers kwiindawo eziphambili zeendlela ezifana neposi.
Ukuthetha ngokuzibandakanya - Ishedyuli yokuthetha ngentsebenziswano kunye namaqela asekuhlaleni kuluntu njengesiGqeba seMatriki esiPhezulu, iMasonic Lodge, njl.
Hlanganisa iDrayivu yokuBhaliswa kweVote - Ukubhalisa ukuvota kukuvumela ukuba ufumane abaxhamli nabasenokuba ngabaxhasi abangenakuvota ngenye indlela.
Isango ukuya kwiNkundla yokuThuthukisa - Igama elilula lomkhankaso lomlomo lingenza umehluko ngokukodwa ekukhumbuzeni abavoti ukuba baye kwiipolon.
IKomidi Yefoni - Indlela elula yokupota abavoti kuluntu kwakunye nokubazisa malunga nokugqithiswa kwemibandela kunye nokubakhumbuza ukuba bavote.
I-Imeyili eyithumelayo - Thumela amaflaya afakalisa ukugqithiswa kwemboleko emva kweentsuku ezimbalwa ngaphambi kokuvota.
Imidiya - Sebenzisa amaphephandaba ukuze ufumane umyalezo xa kunokwenzeka.
Kukho ezinye iinjongo ezinengqondo zabo ezenziwe kwi-bond bond, phambi kokuba wenze isigqibo sokwenza oko. Abanye abantu bahlala bevota ewe, kwaye abanye abantu bahlala bevota. Musa ukuchitha ixesha xa uzama ukukholisa "ii" iivoti ezifanele zivote "ewe". Kunoko, gxila ekufumaneni iivoti "yee" kwii-polls. Nangona kunjalo, kubaluleke kakhulu ukutshala ixesha lakho kunye nomgudu kulabo basekuhlaleni abangazange bagqibe. Ukutyelela abo befowuni 3-4 amaxesha kulo lonke uphulo lokuzama ukubenza bavote "yebo". Bayiyo abantu abaya kugqiba isigqibo sokuba ngaba i-bond iyadlula okanye ayiphumeleli.
Iimfanelo ezibalulekileyo zoMfundisi Olungileyo
20 Iinkcukacha Ngeenqununu Wonke ootitshala kufuneka bazi
Isicwangciso soTitshala ukuphuhlisa ubudlelwane obuhle kunye nabafundi
Izindlela Abafundisi bangakha ubudlelwane obuthembayo kunye neNqununu yabo
Iindlela zokuPhucula ukuThuthukiswa koBuntu kunye noPhuhliso lwabaTitshala
Imiba yesikolo echaphazela kakubi ukuFunda kwabafundi
Ngaba i-Supersets kuphela Ekulungele ukuCawula kunye neNjongo zoNgcaciso?
Iimvakalelo eziphambili 'Ii-80s Iingoma zokuFaka i-Job Job Search
Apollo 14 Mission: Buyela kwiNyanga emva kweApollo 13
Indlela yokwenza uvavanyo lwesazela
Iingoma ezibalaseleyo zikaEdith Piaf
Ukusebenzisa 'Al' Elandelwa nguNgcinci
Ukuqonda iZityalo eziTropisms
Indlela yokudibanisa isiFrentshi '-re' isenzi 'uMordre' ('ukuBite')
I Komiti Yezenzo Zezopolitiko Inkcazo